စက်တင်ဘာလက တော်တော်လေးနီးနေပါပြီ။ သြဂုတ်လမှာတော့ မိုးကြွင်းမိုးကျန်တွေ ရှိနေသေးသလို ဘုရားရှင်နောက်ဆုံးစံတော်မူရာ အရပ်မှာ ရေလွှမ်းမိုးမှု အချက်ပေးသံတွေက ဆူညံနေတုန်းပါ။ နောက်လဆိုရင်တော့ ရာသီဥတုကလည်း မိုးသားတိမ်တိုက်တွေ ကင်းစင်သွားပြီမို့ ခရီးတစ်ခုကို စတင်မယ်ဆိုရင် မှန်းသလောက် ပေါက်နိုင်တဲ့ အနေအထားကို ရောက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓအရှင်ရဲ့ ခြေရာနောက်လိုက်ပြီး ပရမတ္တအရောင်တွေ တလက်လက် တောက်ပခဲ့ရာနေရာတွေကို မြတ်နိုးကြည်ညိုစွာ လျှောက်လှမ်းလိုသူတိုင်းအတွက် ဘုရားဖူးခရီးစတင်သင့်တဲ့ အချိန်ကောင်းပါပဲ။(တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ဒီလိုစိတ်ထားရှိကြတာ သေချာလှပါတယ်။ ဂုရုကွေးကြီးပြောသလို ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါး ငွေယားလေးသာရှိရင် ဘုရားဖက်တရားဖက်ရောက်ကြတဲ့ ကျုပ်တို့အမျိုးရင်းကြီးတွေအတွက်တော့ အထူးပြောဖွယ်မလိုဘူးပေါ့။)
ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူရာ ဗုဒ္ဓဂယာအနီးမှာ ရည်ရွယ်ချက်မွန်မြတ်စွာနဲ့ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဂယာလေဆိပ်ဟာလည်း နိဗ္ဗာန်ဆိပ်ကူးတံတားထိုးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂယာလေဆိပ်က ဘုရာဖူးရာသီတွေမှာပဲ ဖွင့်လှစ်တတ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကလာကြမယ့် ဘုရားဖူးခရီးသည်တွေ အတွက်တော့ ဘုရားဖူးခရီးသွားအေဂျင်စီတွေရဲ့ တခုတ်တရ၀န်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်း အစီအစဉ်တကျ ဖူးမျှော်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပေမယ့် နိုင်ငံတကာမှာ ရောက်နေကြတဲ့ သူတော်စင်တွေအတွက်တော့ ဘုရားဖူးခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ အဆက်အသွယ်ကောင်းလေးတွေ လိုအပ်လှပါတယ်။
ဥရောပလို အမေရိကလို ယုတ်စွအဆုံး အဖရိကတိုက်ထဲက တောနက်ကြီးတွေထဲပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံငွေကြေးရှိရင် လမ်းပြကောင်းတစ်ယောက်နဲ့အတူ အလွယ်တကူ သွားလာဖြတ်သန်း နိုင်ပေမယ့် အိန္ဒိယနိုင်ငံဆီကို ဦးတည်လာတဲ့ သံဝေဇနိယဘုရားဖူးခရီးကတော့ ဘာသာရပ်အသစ်တစ်ခုပါ။
နေရာလမ်းညွှန်ထက် အမြိုက်လမ်းညွှန်က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ အမြိုက်ဆိုတာ အမရိတ(amrita) ဆိုတဲ့ သက္ကတစကားကို မွေးစားထားတာပါ။ ပါဠိလိုတော့ “အမတ” ပါပဲ။ အမတဆိုတာ မသေခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရသလို နိဗ္ဗာန်ကို ရည်ညွှန်းကြောင်းလည်း သိကြမှာပါ။ ဘုရားရှင့်သာသနာ ထွန်းကားပွင့်လန်းရာ အထိမ်းအမှတ်နေရာတွေအတွက် နေရာအနှံ့ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်တွေ ရှိလေတော့ လက်ညှိုးတစ်ချောင်းညွှန်ပြလိုက်ရုံနဲ့ ပြည့်စုံသွားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာက ဘာလို့ လွယ်လွယ်ပြောလိုက်ရင် ပြီးသွားနိုင်ပါတယ်။
ဘုရားရှင်ကတော့ သမိုင်းပညာရှင်တွေလို လကမ္ဘာစူးစမ်းသူတွေလို ကောက်ချက်အမျိုးမျိုးချပြီး ဘာတရားမှလည်းမရ ဘာသံဝေဂကိုမှလည်း မဆည်းပူးဖြစ်တဲ့ ဘုရားဖူးတွေကိုတော့ သံဝေဇနိယလေးဌာနတရားကို ဟောလိုခဲ့မှာ မဟုတ်ကြောင်းသေချာလှပါတယ်။
ကိုယ်တော်မြတ်လျှောက်ခဲ့တဲ့ လမ်းမှာ ကိုယ်တော်အရှင်ဘာတွေ ဟောခဲ့သလဲ။ ဘယ်လို ကျင့်ကြံစေလိုခဲ့သလဲ စတဲ့ ဓမ္မနွှယ်တဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ဘုရားဖူးခြင်းကိုသာ ချီးမွှမ်းအားရတော်မူပေလိမ့်မယ်။
''HE WHO SEES THE DHAMMA, SEES ME,
HE WHO SEES ME, SEES THE DHAMMA.''
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်က အမေရိကတိုက်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ သာသနာ့မိခင်မိသားစုရဲ့ အဖေကြီး အမေကြီးနှစ်ယောက်အတွက် ဘုရားဖူးခရီးစဉ်တစ်ခုကို ရေှးဆွဲပြီး အမြိုက်ခရီးသွားဖော် အဖြစ် ပါရမီဖြည့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
သူတို့အတွက် ရေးဆွဲဖြစ်တဲ့ ဘုရားဖူးခရီးစဉ်လေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် နည်းမှီစဉ်းစားနိုင်အောင်ပါ။ ခရီးစဉ်ထဲမှာ ဗုဒ္ဓဂယာကို ပိုပိုသာသာလေး ရက်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ ဘုရားပွင့်ရာ မြေမြတ်မဟာမှာ အေးအေးလူလူ ဘာဝနာတစ်ခုခုကို ပွားများနိုင်တာပေါ့။
တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။၊ အိန္ဒိယရောက်မှတော့ ကမ္ဘာ့အံဖွယ်တစ်ပါးလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ တပ်ခ်ျမဟာလ်ကိုလည်း ခရီးစဉ်ထဲ ထည့်ပေးရတာပါ။ ကလေးတွေက သူတို့သိတာက စမေးရင် ဖြေနိုင်ရမယ်လေ။ ပြီးမှ ဘုရားဖူးခရီးစဉ်အကြောင်းနဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်ကို ဆက်ပြောကြတာပေါ့။.
Dear Religious Brother & Sister
This is the itinerary for the Buddhist Circuits
(18/19-10.2008 ) (from US to India)
(20.10.2008) (New Delhi Sight-Seeing)and (at 6:00 pm we take train to Varanasi)
(21.10.2008)(Varanasi where the Buddha delivered his first Dhamma)
(22.10.2008) (Varanasi Sightseeing)
ဗာရာဏသီ ( ဓမ္မစကြာတရားဦးဟောရာနှင့် ဂင်္ဂါမြစ်ကမ်းပါးရှုခင်း)
(23.10.2008) from this day early morning, we begin to go by car to (Savatthi where the Buddha stayed for 25 years)
ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သီတင်းသုံးခဲ့ရာ သာဝတ္ထိပြည်မွန် ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်ရာနှင့် ကောသလမင်း၏ မြို့တော်ဟောင်း
(24.10.2008) (Lumbini where there the Buddha was born ) Noted that it is situated in Nepal
ဘုရားအလောင်းတော်ဖွားမြင်ရာ လုမ္ဗိနီသာမော အင်ကြင်းတော
(25.10.2008) ( Kusinagara where the Buddha passed away)
ဘုရားရှင်နောက်ဆုံးလျောင်းစက်ရာ ကုသိနာရုံ အင်ကြင်းစုံ
(26.10.2008) (Vasali and Pattana the kindom of Asoka)
ဗုဒ္ဓသာသနာပြုမင်းဧကရာဇ်အသောက၏ နန်းတော်ရာဖြစ်ခဲ့ဖူးသည့် ယနေ့ခေတ် ဘီဟာပြည်နယ်မြို့တော် ပတ္တနားနှင့် ဒုတိယသင်္ဂါယနာတင်ရာ ဝေသာလီ
(27.10.2008 ) (Rajagriha the Kindom of Bimbisara ) (Nalanda University)
ဗိမ္ဗိသာရမင်း၏ မဂဓတိုင်းမြို့တော် ရာဇဂြိုဟ်မှ ဗုဒ္ဓ၀င်နေရာများနှင့် နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်
(28.10.2008) to (2.11.2008)(Bodh Gaya where the Buddha attained the Enlightenment)
ဗုဒ္ဓအရှင် သဗ္ဗညုတရွှေဥာဏ်တော်ကိုရရှိရာ မဟာဗောဓိညောင်ပင်၊ နေရဉ္ဇရာမြစ်ကမ်းပါးနှင့် ဥရုဝေလတော
(2.11.2008) (from Boodh Gaya to Delhi by train)
(4.11.2008) ( Taj Mahar the world wonder)
At that night my Dagagyi and Dagamagyi will take the flight to US( 5.11.2008 12:30 am)that is Midnight of (4.11.2008)
Four Samvejaniya places are ;
2)Bodh Gaya(25.10.2008) (Pwint)
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 10:37 AM
ရည်ရွယ်ထားတာတွေထဲမှာ တနေ့တော့ ဗုဒ္ဒဂယာ အရောက်သွားပြီး ၉ရက်လောက် ယောဂီဝတ်ဖို့ ပါပါတယ်။
ဒီဘလော့ကို ရောက်ရတာ ဗုဒ္ဓဂါယာကို ရောက်သလိုပဲ ခံစားရပါတယ် ဘုရား နောက်မှပဲ အရင်တင်ထားတဲ့ ပို့စ်တွေကို လာဖတ်ပါဦးမယ်။ Link ယူသွားပါတယ်ဘုရား။
အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုပြီး အထုပ်အပိုးလေးတွေကို ဖောင်ဖွဲ့ပြီးကာမှ ဖုန်းမစ်စ်ကောလ်တစ်ခုက သူ့မဇ္ဈိမဒိုင်ယာရီကို ဆွဲဆန့်လိုက်ပြန်တယ်။ ရထားလက...
(၁) မာတရံ ပမုခံ ကတွာ၊ တဿ ပညာယ တေဇသာ။ အဘိဓမ္မာကထာ မဂ္ဂံ၊ ဒေ၀ါနံ သမ္ပ၀တ္တယိ။ (အရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသ) ငယ်စဉ်ကိုရင်လေးဘ၀က ဆရာဘုန်းကြီး၏ ရှေ့မှောက်တွင...
အဖေလို့သာ ခေါ်ပါလေ သားရဟန်း
အဖေလို့သာ ခေါ်ပါလေ သားရဟန်း (၁) “ကိုယ်တော့်အမေကတော့ ဖုန်းတမျှော်မျှော်နဲ့ပြောမဆုံးတော့ဘူး၊ အမေ့ဆီကိုမဖြစ်မနေဖုန်းဆက်ပါ မောင်ပဉ္ဇင်း” “ဟုတ်ကဲ့...
ဘာတစ်ခုမှ မပွင့်ရင် ဘာတစ်ခုမှ မကြွေတော့ဘူး... ကဲ ဘာဖြစ်လဲ ထပ်ပွင့်တယ် ထပ်ကြွေတယ် အပူဒီဂရီ ၁၀၈ ပုတီးပတ်ရေ ၁၀၈ သဘာဝလေးအတိုင်း လွမ်းမိကြ။ ...
About - VEN. KUSALASAMI GUTLEUTSTR 127, 60327, FRANKFURT AM MAIN Telephone: +4915214489565 Email: kusalasami@gmail.com Venerable Kusalasami was born in 1981 at P...